Waa kuwee dumarka dunida ugu taajirsan? - Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»Waa kuwee dumarka dunida ugu taajirsan?
MacKenzie Bezos waxay shirkadda Amazon ku yeelaneysaa saami dhan 4%
Ninka ugu taajirsan dunida iyo xaaskiisa oo furriin ku heshiiyey ayaa keentay iney Ms MacKenzie ku biirto liiska haweenka dunida ugu taajirsan.
Mulkiilaha shirkadda caanka ee Amazon Mr Jeff Bezos iyo Xaaskiisa Ms MacKenzie waxay ku heshiiyeen iney isfuraan isla-markaana ay haweeneyda shirkadda ku yeelato saami dhan 4% oo lacag ahaan noqonaya $35.6 bilyan oo doolar £27 bilyan oo Gini.
Haddaba hantida ay haweeneydaasi furriinka ku heshay ayaa waxay ka dhigtay haweeneyda seddexaad ee dunida ugu taajirsan iyo qofka 24-aad ee dunida ugu taajirsan.
Haddaba waa kuwee haweenka dunida ugu taajirsan? Sideyna halkaasi ku gaareen?
Hantida ay leedahay: $49.4 bilyan oo doolar, waxayna dunida kaga jirtaa kaalinta 15aad ee dadka dunida ugu taajirsan.
Waa tuma haweeneydan?
Shirkadda Faransiiska laga leeyahay ee soo saarta waxyaabaha timaha lagu qurxiyo L’Oreal, iyada iyo qoyskeeda waxay ku leeyihiin saami dhan 33%.
Haweeneydan oo 65 jir ah waxay hantida ugu badan ay ka dhaxashay Hooyadeed oo 94 jir ku dhimatay bishii September 2017-kii.
Sida oo kale Ms Bettencourt-Meyers waa haweeney waxbarashada heer sare ka gaartay waxayna qortay buugaagta kala ah ‘Greek gods’ iyo ‘Jewish-Christian Relations’.
Hantida ay leedahay: $44.4. bilyan oo doolar, waxayna dunida kaga jirtaa kaalinta 17aad ee dadka dunida ugu taajirsan.
Haweeneydan 69 jirka ah waa gabadha keli ah ee uu dhalay Mulkiilaha Supermarketka Mareykanka ugu weyn ee Walmart.
Haweeneyda Furriinka ku taajirtay
Hantida ay leedahay: $35.6 Lacagtaasi oo ah saamiga ay furriinka ku heshay oo ay ku yeelaneyso shirkadda weyn ee Amazon.
Haweeneydan 48 jirka ah oo afar carruur ah u dhashay mulkiilaha Amazon, oo ay isguursadeen sanadka marka uu ahaa 1993-kii waxay ku kulmeen goob ay ka wada shaqeeynayeen.
MacKenzie Bezos oo ka soo jeedda gobolka California waxay shirkadda Amazone ugu shaqeeyneysay xirfadda xisaabaadka, waxayna qortay buugaag caan iyada oo waxbarashadana aad ugu fiicneyd.
Hantida ay leedahay: $23.9 bilyan oo doolar waxayna taajiriinta dunida kaga jirtaa kaalinta 33-aad.
Haweeneydan 79 jirka ah waxay leedahay shirkadda Mars, waxayna shirkaddaasi dhaxal ahaan ka soo jeeddaa oo soo gaarsiiyey awoowgeed oo 1911-kii aasaasay.
Shirkadda ay qoyskeeda leeyihiin ay 20 sano shaqaala ka soo ahayd, waxaana shirkadda Mars lagu yaqaannaa iney tahay warshadda ugu weyn ee soo saarto cunnooyinka xayawaanaadka.
Hantida ay leedahay: $22.1 bilyan oo doolar waa haweeneyda dalka Shiinaha ugu taajirsan dunidanna waxay liiska taajirnimada kaga jirtaa kaalinta 42aad.
Haweeneydan 37 jirka ah waxay leedahay mid ka mid ah shirkadaha dhismaha ee ugu horreeya dalka Shiinaha. Sida ay boggeeda ku qortay shirkaddeeda dhismaha ee ‘Country Garden’ waxay 2016-kii shirkadaha dhismaha waxay ka gashay kaalinta seddexaad.
Yan Huiyan, waxay ka qalin jebisay jaamacadda Ohio State University, 57% boqolkii saamiga shirkaddan waxay ka dhaxashay Aabbaheed.
Hantida ay leedahay: $21 bilyan oo doolar, liiska taajiriinta dunida waxay kaga jirtaa kaalinta 46-aad.
Haweeneydan 56 jirka ah ee u dhalatay dalka Jarmalka taajiriinta Yurub waxay kaga jirtaa kaalinta labaad waxayna hantida ugu badan ka sameeysay dawooyinka iyo qalabka baabuurta oo ay soo saarto.
Shirkadda dawooyinka 57% waxay ka dhaxashay waaliddiinteeda, halka ay iyada iyo walaalkeed ay shirkadda baabuurta ee BMW ay ku leeyihiin saami dhan 50%, waxayna si gaar ah u leedahay shariikado kale.
Hantida ay leedahay: $18.6 bilyan oo doolar, taajiriinta dunida waxay kaga jirtaa kaalinta 54-aad.
Haweeneydan waxay qoyskeeda ka dhaxashay saami $20 bilyan gaaraya ee shirkadda Apple iyo Disney marka uu ninkeeda dhinto.
Haweeneydan oo 55 jir ah waxay qayb ka mid ah hantideeda ay ku maalgelisaa warbaahinta, iyada oo saamiga ugu weyn ku leh wargeysaka Atlantic, waxay sida oo kale ay dhaqaale ku taageertaa hay’ado samafal ah oo ay ka mid yihiin Mother Jones iyo ProPublica.
Waxay sida oo kale dhaqaale ku taageertaa sanduuqa samafalka ee Emerson Collective, waxayna sida oo kale ka shaqeeysaa arrimaha muhaajiriinta iyo horumarinta waxbarashada.
Bishi May 2018-kii guri 6 qol ka kooban oo ka soo horjeeda Buundada weyn Golden Gate Bridge ee ku yaalla gobolka San Fransisco ee Mareykanka.
3 tips to deal with a spendthrift partner